Taariikhda My Butros » Waxaan aragto qof Waxaan jeclaan – Hadda Maxaa?
Last updated: Feb. 17 2020 | 5 min akhri
Sidaas, Waxaad saxiixay in laba goobood oo shukaansi iyo ahaantii helay dad dhowr aad jeceshahay in aad hesho si fiican tahay inaad ogaato… laga yaabaa xataa taariikhda. Maxay aad hadda u?
Well, waxaad ka dhigi kartaa ilaa aad profile iyo sugaan qofka in aad la xiriiri, laakiin waxa aad u badan tahay natiijada aad uga fiican ka heli haddii aad qaado tallaabo ah. Marka aad hesho qof oo xiiso leh iyo dareento inay khasab ku tahay in la sheego “Hey”, hana u noqonin aad u xishood! Qofkaas kaliya jecel waxaa laga yaabaa inay maqlaan adiga oo ka. Ka dib dhan, ay abuuray profile ah, kaliya aad jeceshahay, oo rajaynaya in uu qof la kulmo. Hubaal uma ogaan doonaa inaad iyaga soo xiriir haddii iyo ogaato.
Ladies, Ha ka xishoon – nin Jecel in lagu eryaday!
Sidee baad u bilaabi xiriir?
Siyaabaha ugu badan tahay inaad la xiriirto qof waa la email ah, fariin dagdag ah, ama "wink '.
Waxaan ku talineynaa in badbaadinta fariin u dagdag ah ilaa aad ka emails yar isweydaarsaday sababtoo ah waxa ay ku siinaysaa waqti badan in aad ka fikirto waxa aad oranayso iyo inay aad u dareento isku qofka kale. Marka aad hesho wax dheeraad ah la yaqaan leh kasta oo kale, markaas waxaad bilaabi kartaa sheekaynta.
Haddii aadan haysan xubin ka bixisay, doonnaa in aad u badan tahay in la koobnayn isticmaalaya 'baaqaa’ ama 'dhoolo-’ ama wax la mid ah. Kuwani waa fariimo qasacadaysan oo ku odhan doonaa wax la mid ah “Nancy xiiseynayo aad ee” ama “Joe oqoonla'aanta aad ugu”. Baaqaa oo dhoolo-waa hab si deg dega u hello laakiin si wayn xaddido awoodda aad u leedahay in Pique qof ee xiisaha. Waxay dhigaysaa cadaadis badan oo ku saabsan haysashada profile a heer sare ah sababta oo ah waxay yeelan doonaan in ay sameeyaan dhamaan hadalkaaga aad u.
Email waxaa fiican in bilowga.
Email taariikh ku iman kara badan oo sida shukaansi. Ujeedada email ugu horaysa waa in aad u inuu ka jawaabo, si loo furo wadahadal ah. Waxaad doonaysaa in aad hesho xiisaha laakiin tago u furan si ay u jawaabi doonaan dib si aad u. Hayso emails aad gaaban iyo soo jiidasho badan. Tilmaan yar oo kale: Hana Eryin daba jog ah emails in hal qof, waxay raaceen xawaaraha iyo isku day in aad sii. (Haddii ay kuu soo diraan 4 toddobaadkii, kuu soo diri 4 ama si todobaadkii.)
Sidaas Sidee u qortay Email First?
Marka u jawaabno xayeysiis shakhsi, isku day in aad noqon, sidoo, personable. Ku qor ugu yaraan ah sadarka ama laba aad naftaada ku saabsan iyo waxa aad jeceshahay ama ay ad shakhsi ku saabsan. Qaar badan oo ka mid ah mabaadiida qoraal profile codsan in email, sida joogi wanaagsan, daacad, iyo bixinta si higaada iyo naxwaha dareenka dhow.
Qof Kulan online waa mid aad u xiiso badan oo ka dhigi kartaa inaad dareento sida jacaylka a dhuftay wiil dhalinyaro ah, laakiin aan ka dhawaajin sida mid ugu wanaagsan samayn. Inta badan oo naga mid ah waxa ay raadinayaan qof in ka badan tahay wax yar qaan, qof in uu leeyahay awood u ahaanshaha lammaanaha ee Meyeydaan. Marka ugu horraysa ee aad bilowdo la xidhiidhka qof, Ma jiro wax ka qaldan xodtooy, isagoo faraxsan, iyo qosol, laakiin hubi ma ahan badan hogaanka. Sidoo kale, ma bilaabi by naftaada daadinno, isaga ama iyada dhan sheegaya xaaskaaga ex-aad ama ex-ool ah oo kale. Ka fogow hadalka ku saabsan waxyaabaha shakhsiyeed sida dhibaatooyinka dhaqaale, arrimaha caafimaadka, ama sheekooyin ku saabsan sax ah qoyska. Tani waa turnoff weyn, iyo dariiqa ugu wanaagsan in iska cabsiiyo qof. Save noocaas ah hadal aad ciyaarta poker habeenkii khamiista ama maalinta ugu timo jaraha. Haddii aad tahay waalid keli ah, wax yar oo wada hadal ku saabsan carruurtaada way wanaagsan tahay in ay jebiyaan barafka iyo hesho qaab guud oo, balse xusuusnow in aad doonaysid in la dhiso xiriir ah ayaa ka taataabtay, si aad u dhawrtaan ugu yaraan.
Had iyo jeer daacadii!
Haddii xiriirka dadkii xeradu guurayaan,, runta soo bixi doonaan danbeyn. Sidan ayaa ka wanaagsan in aad naftaada u ahaan afka hore halkii ay ka been doqon ah u sheeg in bilowgii, kaliya in laga helo oo aad xiriir ka iman kara marka laga reebo dhici.
Waxaa Hayso wanaagsan!
Waxa la soo dhaafay qof doonayo waa in uu diro farriin ah in qof iyo wax ka qabashada, maqal la soo dhaafay oo dhan ku saabsan guuldareystay xiriirka, Dhibaatooyinka caafimaadka, ama hoog oo dhaqaale. Waxaad wadaagi kartaan cadaab iyo mugdi ka dib markii aad hesho si kasta oo kale oo wax laga ogaado. Ama ka fiican weli, alaabtayda oo dhan in kaliya aad ka dambeeya sii gudbayo. Waxaa la gaaray waqtigii jirin sida xaadirka ah si ay u bilaabaan cusub!
Wax hambalyeey aad u xiiso badan helay in ay profile.
Tani waa meesha waxaa muhiim ah in la akhriyo profile qofka. Waxa ay ku siinaysaa wax in laga hadlo aad. Tusaale ahaan, haddii aad tahay qof dumar ah oo aad ka heli nin oo xiiso leh iyo waxa uu leeyahay eeyaha Labrador adoo kale ah, waxaad dhihi kartaa wax u eg, “Waxaa. Magacaygu waa Mary iyo ayaan ogaaday in aad profile in aad leedahay Shaybaarka. Waxaan sidoo kale sameyn!” Oo halkaasaannu, siiyaan sharaxaad kooban oo aad eey, xuso in aad ku raaxaysato lahaa maqalka dib, iyo saxiixa off.
Iska ilaali comments-hehiisiinta galmada.
Ha iman on xoog bataan marka hore la innuendos galmada iyo isku day in aadan faallo sawirka qofka. Raadi wax yar ka badan 'qoto dheer’ in uu ka hadlo, malaha wax ay sheegay in ay sharaxaad.
Raadi hab inay sii wadaan isgaadhsiinta.
Barta ugu weyn ee email ugu horeysay ee waa in la helo iyaga oo aad aragto iyo in ay dib kuugu soo jawaabo. Ha quusan macluumaad aad u badan, laakiinse wuxuu iyagii ku filan u sheeg in aad u xiiso. Waxaad isku dayaysa inay wada hadal u socdo, si waydiinaya su'aalo waa fikrad fiican, ilaa iyo inta aadan codsan aad u badan.
Sheeg waxyaabaha aad qabto ee caadiga ah, iyo weydiiso su'aal ama laba iyaga ku saabsan.
Tusaale ahaan, marka ugu horeysa ee aad bilowdo fariin leh qof, waxaad ka codsan kartaa, “Ma sameeyaan wax xiiso leh toddobaadkan?” “Ha aad qabto wax qorshe weyn ee todobaadkan?” Tani waxay kaa caawin doontaa in aad wax dheeraad ah oo ku saabsan qofka barto oo aan u muuqan san weyn leh. Ka dib marka lagu la xidhiidhka qof gaar ah intii muddo ah, waxaad isticmaali kartaa su'aalo aan waxba galabsan si loo arko haddii aad ka heli kartaa furitaanka ah in mar marka laba idinka mid kulmi laga yaabaa.
Isku day inaad ka fogaato waraaqaha dheer oo aan la faahfaahin yar in la tixgelin karaa caajis.
Waxay ku ilaali barta, laakiin isku day inaad u sheegto shakhsiyadda u dhalaali marayo. Markaas, sharci fiican wada raacsan yahay “bogaadin iyo su'aalo.” Ammaan ah dadaalka aan ku guulaha ee qofka, style qoraal, ama gool nolosha ku odhan doonaa waxyaabo badan oo.
Halkan waxaa ku qoran dhowr wanaagsan, mowduucyo bilaaban baraf jebinta-:
Haddii aad ku nooshahay isla aagga, faallo aagga, ama la xiriira wax si. Haddii aadan ku nool isla aagga, aad su'aalo ku saabsan halka ay joogaan ka codsan kartaa.
Music iyo aflaanta ayaa sidoo kale waa wanaagsan wada hadal-heleynin; qof kasta ugu jecel yahay nooc ka mid ah muusig ama movie.
Waxaa laga yaabaa inaad u tageen inay kulliyadda isla ama ka fiican weli, dugsi horjeeda. Aadiyo xiiso dugsiyada horjeeda had iyo jeer si dheeldheela oo lagu jebin barafka waa.
Iyo calaamad aad magacaaga hore dhabta ah…
Haddii aad shaqayso xuquuqdaas, qofka dib waxaad la xiriiri doonaa. Xusuusnow, xataa haddii aad hesho jawaab, waxaad inaan sii xiisaheeda. In emails in la raaco, sii waydiinaya su'aalo iyo sii ammaanayaa (halka inta soo hartay daacad ah oo wanaagsan). Marka aad dareento raaxo, waxaad usii gudbi kartaa si aad foomam dheeraad ah oo saaxiib ah isgaarsiinta sida fariimaha deg dega, telefoonka, iyo ugu danbeyn, kulan in qofka.
Haddii maalintii by dhaco adiga oo aan ka maqlay iyaga iyo, halkii ay ku qarqin boostada shakhsiga ee la farriimo, ka tago mid ka mid gaaban, fariin macaan oo bixiya si maldahan u yar in ay isaga ama iyada ku dhaliyay in ay soo jawaabin.
Ha bixin aan magacaaga oo buuxa, cinwaanka email shakhsi, ama lambarka taleefanka ee email tan bilowga ah; sugaa ilaa inta labada xiiso aad tahay, waana wax cad in arrintu meel u socoto.